यी चारजना कसको स्वार्थ र इशारामा अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्दै छन् ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
यी चारजना कसको स्वार्थ र इशारामा अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्दै छन् ?
२०७८ जेष्ठ १६, आईतवार १९:१०:००
जबजब अदालत गम्भीर र संवेदनशील घडीमा पुग्छ, यी चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु सल्बलाउन थाल्छन् । कहिले सामूहिक वक्तव्यबाजीमा उत्रिन्छन् त कहिले मिडियामा अन्तरवार्ता दिएर छाउँछन् । कहिले दृश्यमा आफै देखिन्छन् त कहिले आमसञ्चारमा छद्म स्वरुपमा प्रकट हुन्छन् । यी चार जना हुन्, मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की ।
अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद अदालत पुग्नासाथ उनीहरुले इजलासबाहिरैबाट एक थान फैसला जारी गरिसकेका छन् । इजलासमा बहस हुन पाएको छैन, अदालतका न्यायाधीशहरुले मिसिल हेर्न पाएका छैनन् र यी चारजनाले घरै बसेर फैसला नै लेखिसके । वक्तव्यको भाषा यस्तो छ कि उनीहरुले भनेअनुसार फैसला नभए मुलुक डुब्छ, आकाश खस्छ, धर्ती भासिन्छ । न्यायालय र न्यायाधीशको त के कुरा भयो र ?
उनीहरुको पण्डित्याइँ हेर्दा के लाग्छ, यो देशमा संविधान, कानुन र संसदीय परम्परा एवं सिद्धान्तबारे जान्नेसुन्ने अर्को कोही व्यक्ति नै छैन । अदालतमा भएका न्यायाधीश त केवल थपना मात्र हुन् । ती चारजनाले दिशानिर्देश नगर्ने हो भने अदालतबाट सही निर्णय आउन पनि असम्भव छ ।
यसअघि पनि संसद विघटन हुँदा यी चारैजनाले यही बेहोराको वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यसवापत उनीहरुले अवहेलना मुद्दा पनि धाइरहेकै छन् । थप अर्को एक थान वक्तव्यले अहिले अदालत र न्याय क्षेत्र तरंगित भएको छ । अदालत र खासगरी इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुमाथि यसरी दबाब सिर्जना गरेका छन् कि उनीहरुको वक्तव्यको भाषाभन्दा थोरै मात्र बाहिर जाँदा पनि जनमानसले शंका गर्नेछ । उनीहरुकै भाषामा फैसला आए त झन्
त्यही वक्तव्यको दबाबमा आएको बुझ्न गाह्रो पर्ने छैन ।विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बोल्ने, टीकाटिप्पणी गर्ने वा वक्तव्यबाजिमा उत्रिने काम सामान्यतः उचित मानिदैन । यो अदालतको अवहेलनाको विषय हुन्छ । अदालतलाई प्रभाव पार्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने यस खालका क्रियाकलाप कतैबाट भए पनि स्वीकार्य ठहरिन्न । कतिसम्म भने इजलासमै भएका न्यायाधीशहरुमध्ये पनि एकले अर्कोलाई दख्खल दिन पाइँदैन । प्रधानन्यायाधीशले समेत अर्को न्यायाधीशको न्यायिक विवेकमा शंका गर्न, दबाब दिन वा चासो राख्न मिल्दैन ।
अदालतमै कपाल फुलाएका यी हस्तीहरुले यति कुरा पक्कै नबुझेका होओइनन् । उनीहरुले जानीबुझी यो सब गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरुले यस्तो किन गरिरहेका छन् ? किनकि, यिनका पछाडि अरु कुनै शक्ति छ । त्यसैको इशारा र स्वार्थमा यिनले साझा भाषा बोलिरहेका छन् । कानुन क्षेत्रका मान्छेको बायोडाटा देखाएर विदेशीबाट परियोजना सञ्चालन गर्ने एउटा संस्था छ । बबरमहलमा यसको कार्यालय छ । यसैका एकजना कारिन्दाले यी चारजनाको नाममा वक्तव्य तयार गर्छन् । तिनैले मिडियामा पठाउँछन् । त्यसवापत् ती चारजनाले केकति रकम पाउँछन् भन्ने सार्वजनिक गरिँदैनन् । तर, जसरी काम भइरहेको छ, त्यो सित्तैमा भइरहेको छैन । यसका पछाडि ठूलै स्वार्थ वा परियोजना छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । होइन भने बिनाकुनै स्वार्थ यो हदसम्मको मर्यादाहीन तवरमा कोही पनि व्यक्ति उत्रिँदैन । जिम्मेवार पदाधिकारी त झनै यसो गर्दैनन् ।
न्यायपालिकाको माया हुने व्यक्तिले त झनै यस्तो गर्नै सक्दैन । अदालतको मर्यादाप्रति जोकोही व्यक्ति सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । अझ अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले त थप बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । विचाराधीन मुद्दा र न्यायिक प्रक्रियालाई स्वतन्त्र र एउटा स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न दिनुपर्ने हो । अरुका निम्ति उनीहरु उदाहरण बन्नुपर्ने हो । तर, ठीक उल्टो भएको छ यहाँ । जनमत भड्काउने, गलत नजिर बसाल्ने, इजलासमा भएका न्यायाधीशको विवेकमा अंकुश लगाउने खालका गतिविधि यी हेभिवेटहरुले गरिरहेका छन् ।
यिनीहरुले अहिले पनि राज्यकै मानो खाइरहेका छन् । राज्यकै सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । मासिक ८० हजार रुपैयाँ निवृत्तिभरण, अर्दली, अंगरक्षक, गाडी, चालक, तेल आदि सुविधा सर्वोच्च अदालतबाटै लिइरहेका छन् । अनि तिनैले राज्यको एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायको काममा बाधा खडा गरिरहेका छन् । आफ्नो वा स्वार्थ जोडिएको कुनै शक्तिको इशारामा अदालतलाई नचाउन खोजिरहेका छन् । यो हदसम्मको राष्ट्रघात अरु के हुन सक्छ ? के उनीहरुले यो सम्पूर्ण सेवा सुविधा त्यागेर, पूर्वहैसियतबाट पनि मुक्त भएको घोषणा गरेर सामान्य नागरिकका रुपमा सडकमा आउने हिम्मत गर्छन् ? हिम्मत छ भने त्यसरी आउन सक्नुपर्छ । यदि उनीहरुले सेवा सुविधा त्यागेनन् र अदालतका विचाराधीन मुद्दामा यसैगरी बकबक गरिरहे राज्यले नै खोस्ने आँट गर्नुपर्छ ।
यो केही पनि नगर्ने हो भने यसले गलत नजिर मात्र स्थापित गर्ने छैन, एक खालको अराजकता हावी हुनेछ । चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले एकस्वरमा फैसला त यसै हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब इजलासमा बहस गर्नुको पनि के अर्थ भयो र ? अदालतको समय, स्रोतसाधन के खर्च गरिरहनुपर्यो र ? वकिलहरुले किन घोक्रो सुकाउनुपर्यो र ? न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले मिसिल र कागजातहरु किन पल्टाइरहनुपर्यो र ? अवकाशप्राप्त न्यायमूर्तिहरुको विज्ञप्तिमाथि नै दस्तखत हानिदिए भएन र ?